Nagu saabsan - Hebei Tailian Faakiistaha Warshadaha Co., Ltd.
Hebei Tailian Faashada Warshadaha Co., Ltd.waxay ku taalaa Degmada Yongnian, Handan City, xarunta ugu weyn ee qeybsiga wax soosaarka Shiinaha. Shirkaddu waxay leedahay gabi ahaanba farsamaynta wax soo saarka iyo tiknoolajiyada wax soo saarka ee handarraabbadeedda, hababka tijaabada oo dhammaystiran iyo tikniyoolajiyad wax soo saar oo horumarsan, waxayna hirgelisaa adeegga dhammaan cimilada La aasaasay 2000, shirkaddu waxay daboolaysaa aag ka badan 200 mu waxayna leedahay raasamaal diiwaangashan oo ah 120 milyan yuan.
Shirkadda hadda waxay leedahay in ka badan 300 maareeyayaal, farsamoyaqaanno iyo shaqaale ka shaqeeya shirkadda wax soo saarka, oo loo qaybiyay afar waaxood oo waaweyn: waaxda iibka, xarunta kontoroolka maaddada, waaxda tikniyoolajiyadda wax soo saarka, waaxda maamulka iyo shaqaalaha iyo waaxda maaliyadda. Waaxda iibku waxay ka kooban tahay qaybinta awoodda, qaybta adeegyada gaadiidka, qaybta sawir qaadista iyo waaxyo kale. Waxaa jira xafiiska Tibet, xafiiska Guangxi iyo xafiiska Guangdong. Shirkadda ayaa si buuxda u hirgelisay fikradda maaraynta ee hal-abuurka sayniska iyo farsamada iyo horumarka waara, iyada oo ku saleysan siyaasadda horumarinta ee daacadnimada iyo tayada marka hore. Waxay haysay saamiga suuq aad u sarreeya ee suuqa wax soo saarka Jiaoan waxayna ka qayb qaadatay bixinta in ka badan 200 mashruuc qaran oo xawaare sare ku socda sida Beijing, Hong Kong, Macao, Guangdong, Beijing, Kunming, Qingdao, Beijing, Shanghai iyo Guangdong. Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay had iyo jeer ilaalisay heerka ka-gudbinta alaabada oo ka badan 90% muunad qaadista tayada wax soo-saarka ee Xarunta Imtixaanka Isgaarsiinta iyo Xarunta Kormeerka Tayada Heesaha.
Ujeeddadeenu waa "inaan ku noolaano tayo, inaan ku horumarino sumcad, inaan ka faa'iideysanno adeeg, iyo inaan wax walba ka hor marino dadka isticmaala", iyo inaan abaabulno wax soo saar si adag u waafaqsan heerarka qaranka iyo baahiyaha isticmaalaha. Waxaan ku beeray qalab horumarsan oo qumman, tayada wax soo saarka oo aad u fiican, badeecaduhu si fiican ayey u iibinayaan dalka oo dhan, waxay ku guuleysteen kalsoonida iyo ammaanta dadka isticmaala, xulashada Tailian Fastener Co., Ltd. alaabtu waxay la mid tahay xulashada dammaanad lagu kalsoonaan karo ee mashaariicda dhismaha ! Tylenol Fasteners waxay ku siin doontaa adeeg daacad ah inta hawshu socoto.
Warshadeenu waxay ku takhasustay soo saarida: barkin barroosinka, boolida isteerinka, U-bool, U-hoop, birta birta, birta birta, ciddiyaha alxanka alxanka, kulul-faleebo galvanized bolt, birta munaaraddii birta, fur fur, dhex-derbiga bolt, steel gundhig saxan, bolt macdanta, taxane lowska, qaybo gaar ah-qaabeeya, iwm Shirkadeena waxay leedahay sannado badan oo horumarineed oo ku saabsan cilmi xiraha iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga, waxayna soo uruurisay waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan barxadda barxadda, iyadoo la abuurayo koox injineero ah iyo farsamoyaqaanno ku hawlan barroosinka naqshadeynta iyo soo saaridda iyo farsamo yaqaanno khibrad u leh safka hore. Iyada oo ay sii qoto dheer ee dhaqaalaha suuqa iyo horumarka isdaba jooga ah ee farsamada processing, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed iyo dayactirka qalabka warshadeynta ayaa isbedeleysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyo cabirka wax soo saarkiisu si tartiib tartiib ah ayuu u sii fidayaa. Waxay sameysay shirkad wax soo saar bir ah oo aad u ballaaran oo isku dhafan horumarka, wax soo saarka, soo saarista, dayactirka iyo ka shaqeynta qafisyada aasaasiga ah, qalabka warshadaha iyo macdanta iyo qalabka soo saarista qalabka taxanaha ah, oo leh qaab soosaar naqshadeysan oo sanadle ah oo gaaraya 50000 tan iyo qiime wax soo saar sanadle ah 500 milyan yuan. Shirkaddu waxay leedahay aqoon-isweydaarsiyo wax-soo-saar oo casri ah iyo taageeridda qalabka wax soo saarka iyo sidoo kale qalab tijaabo ah oo dhameystiran. Waxay qaadataa alaabta ceeriin oo tayo sare leh oo ka socota makiinado bir ah oo waaweyn oo ka shaqeeya shirkadaha wax soo saarka birta waaweyn iyo gobollada, waxayna hubisaa tayada qalabka iyadoo si adag loo xakameynayo tayada. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada maaraynta nidaamka tayada leh ee ISO9001.